» महिनावारी हुँदा सरसफाइ कसरी गर्ने ?
महिनावारी हुँदा सरसफाइ कसरी गर्ने ?
१ मंसिर २०७८, बुधबार २२:०६ प्रकाशित
काठमाडौं – महिनावारी भएका बेला आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा त कुनै शंका छैन् । महिनावारीका बेला सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन नसकेमा विभिन्न किशिमका संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ । तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, रजस्वलामा गडबडी हुनेजस्ता समस्या लिएर चिकित्सककहाँ पुग्ने महिलामध्ये करिब एक तिहाइलाई महिनावारीका बेला सरसफाइमा लापरबाही गर्दा यस्तो भएको हुन्छ । महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने प्याड, लुगा वा न्यापकिन कस्तो प्रकारको छ र कति समयको अन्तरालमा परिर्वतन गर्ने गरिन्छ यी सब कुरा सिधै स्वास्थ्यसँग जोडिने गर्दछ ।
महिनावारीका बेला प्रत्येक ४ घण्टामा प्याड बदल्नुपर्दछ । यदि तपाई घरेलु कपडाको टुक्रा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त झन प्रत्येक २–२ घण्टामा बदल्नुपर्दछ । तर यो नियम सबैका लागि समान ढङगले लागू हुन्छ भन्ने छैन् । प्याडको प्रकृति, रगतको मात्रा हेरेर पनि प्याड परिवर्तन गर्ने समय निर्धारण हुने गर्दछ ।